INTER MILAN VS JUVENTUS: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha INTER MILAN VS JUVENTUS: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan
INTER MILAN VS JUVENTUS: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan
(Milano) 06 Okt 2019 – Waxaa caawa dhacaya kulanka xiisaha badan ee Inter Milan vs Juventus ee Derby D’Italia, kaasoo weliba markan cusbo dheeraad ah yeeshay, maadaama ay ku hardamayaan figta sare ee Horyaalka Serie A-da.
Dhanka Inter: Garabka midig ee daafaca waxaa saaran D’Ambrosio oo ka cad cad Candreva. Weerarku waa Lukaku oo uu wehliyo Lautaro Martinez. Muluqa Esposito waa kayd.
Dhanka Juventus: Wuxuu macallin Sarri wataa shaxda 4-3-1-2 iyo daafac dhinac ka kaban oo Cuadrado la saaray: Ramsey wuxuu ka dheelayaa booska lambarka 10-aad, waxaana ka horrreeya Ronaldo iyo Higuain, oo ka cad cad Dybala.
Previous articleShiinaha oo sameeyay kaamiro xoog badan oo xitaa garan karta laafyaha qofka (Mid kumannaan qofka kasoo saari karta oo hadda soo baxday)
Next articleMUCAARADKA: ”Waxaan soo dhowaynaynaa in ay Kenya jebisey xayiraaddii ”HAWADA FARMAAJO!”